यसरी जन्मियो युवा पुस्तामा लोकप्रिय ‘कार्टुन कु्रज’
Thu, Jun 21, 2018 | 08:12:09 NST
Total Views: 39.0 K
काठमाडौं, वैशाख १० – पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा असाध्यै लोकप्रिय नाम हो ‘कार्टुन क्रुज’ । विशेष गरी युट्युबमा उनीहरुको नृत्यलार्ई धेरैले मन पराएका छन् । सुरुमा ‘कार्टुन क्रुज’को नाम ‘बोइज अफ कीर्तिपुर’ थियो जसमा अहिलेका लिड सरोज अधिकारी मात्रै थिए । सन् २००९ मा गठन गरिएको ‘बोइज अफ कीर्तिपुर’को नाम पछि सरोजलाई मन परेन र नाम परिवर्तन गरेर ‘कार्टुन क्रुज’ राखिदिए । यहि नामबाट बिस्तारै उनले काम गर्न थाले र पुराना साथीहरु छुट्दै गए भने नयाँ साथीहरु समेट्दै गए । यही मेसोमा उनीहरुले एक दिन ‘पानी पर्यो असिना झर्यो’ गीत सुने । यसै गीतलाई कभर डान्स गरेर युट्युबमा हाले । त्यसपछि जन्मियो ‘कार्टुन क्रुज’ ।
साँच्चै भन्ने हो भने ‘कार्टुन क्रुज’का लागि गायक अल्मोडा राना उप्रेती लक्की साबित भए भने अल्मोडाको लागि ‘कार्टुन क्रुज’ लक्की ग्रुप साबित भयो । किनकी यस अघि दुवैले आ–आफ्नो ठाउँबाट संर्घष गरिरहेका थिए तर नाम र चर्चा भने सिमित थियो । त्यसपछि एकाएक ‘कार्टुन क्रुज’ सबैको प्रिय ग्रुप बन्न पुग्यो । कुनै समय बिना पैसा ससाना कार्यक्रममा नाच्न पुग्ने ‘कार्टुन क्रुज’ले अहिले एउटा गीतमा कभर गरेको १ देखि २ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको छ । किन त ? सरोज भन्छन्, ‘हामी आफ्नै स्टाइलमा डान्स कम्पोज गर्छौँ, देखाउछौँ फेरि साथीहरु ७ जना छौँ । यति पैसा त लिनु पर्यो नी ।’
यो समूहले पानी पर्यो असीना झर्यो, नाई मलाई था छैन, माया माया लगायतका गीतहरुमा डान्स गरिसकेको छ जसलाई युट्युबमा पनि लाखौँले हेरेका छन् ।
भविष्यमा सिनेमाको पर्दामा देखिने चाहना र रहर ग्रुपका सबैमा छ । तर पनि देशको एउटा ठूलो डान्स ग्रुप बनाउने र डान्सबाटै नेपाललाई चिनाउने क्रुजको सपना छ । पर्दामा जती रमाइला छन् यिनीहरु बाहिर पनि त्यती नै रमाइला र चकचक गरिरहन्छन् ।
कार्टुन क्रुजमा जम्मा सात जना सदस्य छन् । यस समूहका सबिन कार्की सिनेमाको निर्देशन सम्बन्धी अध्ययन गर्न विदेश जाने मन गरेकोले अहिले समूहमा छैनन् । उनी सिनेमा सम्बन्धी पढेर आएपछि फेरि समूहमा रहनेछन् । अहिले यहाँ ६ जना छन् । यी सबै राम्रो नाच्ने मात्रै होइन फरक–फरक प्रतिभा बोकेका कलाकार पनि हुन् ।
सरोज अधिकारी क्रुजका डन, क्यारिकेचरमा माहिर
सरोज अधिकारी क्रुजका संस्थापक हुन् । उनैले ‘बोइज अफ कीर्तिपुर’लाई ‘कार्टुन क्रुज’ बनाएका हुन् । महोत्तरीको बर्दिबास घर भए पनि काठमाडौंको कीर्तिपुरमै जन्मि हुर्केका अधिकारीमा राम्रो नाच्ने क्षमता मात्रै होइन, क्यारिकेचर गर्ने कला पनि छ । उनी समूहमा उर्जा दिनका लागि विभिन्न कलाकारहरुको आवाज निकालेर सबैलाई हँसाउछन् र उत्साह दिन्छन् ।
सरोज विशेष गरी बलिउड कलाकार ऋतिक रोशन, नाना पाटेकर, सुनिल शेट्टी ‘सोले’ फिल्मका चर्चित पात्र ठाकुर लगायत एक दर्जन कलाकारको दुरुस्तै आवाज निकाल्छन् । यता सीताराम कट्टेल उनलाई मन पर्ने हाँस्यकलाकार भएकाले ‘धुर्मस’ले गरेका प्राय पात्रहरुको आवाज निकाल्छन् ।
आश्मा विश्वकर्मा, सिंगल लेडी, गीत गाउन र अभिनयमा रुची
आश्मा विश्वकर्मा ‘कार्टुन क्रुज’की एक मात्रै नायिका । काठमाडौं मै जन्मिएर हुर्केकी आश्मालाई यो समूहमा आउन निकै पापड पेल्नु पर्यो । कारण छोरी मान्छे भएर केटाहरुसँग नाच्नु हुन्न भन्ने नेपाली सोच र चिन्तनले गर्दा । यहि कारण सुरुमा घरबाट स्विकृति नपाएको उनले बताईन् । आश्मालाई गीत गाउन असाध्यै मन पर्छ । बेलामौकामा उनी खुलेरै पनि गाउँछिन् ।
आश्मा भन्छिन्, ‘सानोमा मलाई माइक देख्ने वित्तिकै गीत गाउन मन लाग्थ्यो । मैले बुवा र आमालाई पटक पटक माइक किनीदिनु भनेर अनुरोध गरेकी थिएँ । तर कहिल्यै किनिदिनु भएन । मैले त्यो रहर त्यसै मारीदिएँ । म गीत गाउँछु । मेरो रहर भनेको अभिनय बाट नायिका बन्ने हो । अभिनय पनि सिक्दै छु । हेरौँ के हुन्छ ।’ यस्तो उफ्रेर नाच्दा कहिल्यै दुर्घट्ना भएन ? भन्ने प्रश्नमा आश्मा भन्छिन्, ‘किन नहुनु ? मेरो काँधको लिगामेन्ट च्यातिएको थियो । पछि थेरापी गरेर ठिक पारेको छु ।’
विकास राई, र्यापरदेखि भिलेनको रहर
‘कार्टुन क्रुज’का अर्का खम्बा हुन विकास राई । ओखलढुङ्गाका विकासको हुर्काइ बढाई काठमाडौं मै भएको हो । उनी समूहमा चकचक गरीरहन्छन् । नाच्न र वि बोइङमा पारङ्गत विकासको अर्को खुबी भनेको राम्रो र्याप हान्नु पनि हो । उनी र्याप हानेर आफूलाई फ्रेस गराउछन् भने अरुको लागि पनि कहिले काही र्याप हान्ने गर्छन् । त्यस्तै उनलाई भविष्यमा सिनेमाको भिलेन बन्ने रहर पनि छ ।
राम गुरुङ, मुखैमा बाजा, विट बक्स
राम गुरुङको खास घर नुवाकोट भए पनि उनी काठमाडौं मै बस्छन् । कार्टुन क्रुजमा आवद्ध भएदेखि उनी यसैमा रमाउछन् । उनीसँग एउटा रमाइलो अनुभव छ । केही समय अगाडि चाइनामा भएको एक डान्स प्रतियोगितामा उनले क्रुजको तर्फबाट भाग लिन पाएनन् । कारण थियो उनको पासपोर्ट नहुनु ।
त्यही सम्झिएर उनले तत्काल पासपोर्ट बनाएका थिए । उनी भन्छन्, ‘हाम्रा ४ जना साथीहरु मात्रै जाँदा दोस्रो भएर आउनु भयो । हामी सबै गएको भए झन पहिलो नै पो हुन्थ्यौँ की । त्यही भएर हामीले सबैको पासपोर्ट बनाउन लगाएका छौँ । के थाहा कुन बेला कुन देश जानु पर्ने हो ?’
रामको अनुहार हेर्दा न मादल जस्तो छन् न त ड्रम सेट जस्तो नै । तर उनी मुखैबाट विभिन्न बाजाको आवाज निकाल्छन् । अर्थात विट बक्समा उनको कला राम्रैसंग देख्न पाइन्छ । साथी भाइले गीत गाउँदा विटबक्सबाट उनी साथ दिन्छन् ।
यसबाहेक कार्टुन क्रुजका लाक्पा लामा र सुविन अधिकारी पनि सदस्य हुन् । तर उनीहरुसंग हामीले कुराकानी गर्न पाएनौँ । किनकी उनीहरु पासपोर्ट बनाउनका लागि उपत्यका बाहिर गएका छन् । तर लाक्पा लामा विबोइङ र सुबिन अधिकारी जिम्न्यास्टिक र हँसाउनमा खप्पिस छन् ।